RASMI: Shiishadda oo gebi ahaanba laga mamnuucayo dalka Sweden (Goorma?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RASMI: Shiishadda oo gebi ahaanba laga mamnuucayo dalka Sweden (Goorma?)
RASMI: Shiishadda oo gebi ahaanba laga mamnuucayo dalka Sweden (Goorma?)
(Stockholm) 15 Abriil 2019 – Wixii loo gaaro bisha Luulyo ee bartamaha sanadkan, waxaa gebi ahaanba mamnuuc noqon doonto in Sweden shiishad lagu cabo.
Shiishadda ayaa laga mamnuuci doonaa meelaha ay dadku iskugu yimaadaan, maqaaxiyada iyo xitaa bannaanka guryaha, iyadoo ay durba qayladhaamiyeen meelaha adeeggan ka ganacsada.
Café Dinar oo ku yaalla Huddinge oo ka tirsan Stockholm oo ka mid ah makhaayadahaas ayaa sheegay in ay ”aad uga argagexeen” maqalka go’aankan.
Cabista Shiishadda oo ah dhaqan xidid ku leh dhulalka Carabta ayaa sanadihii dambe aad dunida ugu xoogeystey, gaar ahaan Galbeedka oo ay isticmaalaan dadka kasoo jeeda Bariga Dhexe iyo dhulalka Afrika.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ay sanadihii dambe kusoo xoogaysanaysey Shiishadda oo ah sheey halis caafimaad, mid qiyam iyo mid bulshaba qofka u gaysata.
Previous articleBullhorns: ‘Julian Assange’
Next articleSoomaali kale oo lagu diley dalka Koonfurta Afrika (Magacyada ganacsatada la diley)